Gcina imali Ezi Exchange Tips yeloo waseKhanada
Abakhenkethi badla ukurhweba yokutshintsha imali waseKhanada, leyo umsebenzi ngemihla. Kumhlaba jikelele, kukho uthotho amazwe ahlukeneyo amazwe. Ukufunda iingcebiso ezimbalwa exchange imali waseKhanada kukunceda wenze kakuhle imali yakho.
Ngezantsi siza ukudwelisa ezinye iindawo eziphambili kanye apho, nirhwebe kakuhle. Kwakhona siza ukukucebisa ezinye iingxaki ukuba kwezi ndlela zokunaniselana imali enikwa kuvela.
nabakhi beenqwelo – Ngelo nezikhululo, iidesika umhambi zimiselwa ngenxa ukutshintsha imali. amazinga Exchange zinxulunyaniswe, adla ngaphezu nabanye ababoneleli exchange. Uninzi moya ukubiza amazinga aphezulu, leyo ukuze iindleko kangangoko 20% wamcacisela ukuba wayerhweba. Ezi ziindawo elimlungeleyo abahambi. Oku yephawuleka effortless ukwenza transactions kwakunye ndawo efikeleleka. Xa uthe musa Ungakhathazeka ukuhlawula amaxabiso aphezulu, moya mnye ummandla yalemali exchange.
amaziko yebhanki Community – Kubananisi zibonelela ngeenkonzo yokutshintsha imali waseKhanada. Uninzi iibhanki ezikunika ezingcono kakhulu nezikhululo. Uninzi iibhanki zingabiza iifizi ikakhulu ngokusekelwe kwixabiso yorhwebo. Enye yeengxaki zokusebenza kunye namaziko zebhanki, kodwa, na iiyure zokusebenza. Oku kunokwenzeka kuphela ukwenza trades ngamaxesha evulekileyo. Enye ingxaki yile yokuba amaziko ezemali Bangabi kwindawo ukunikela ukutshintshiselana lwemali ngezixa.
Utsalo ne Credit Cards – Debit kananjalo credit cards kukunika ndlela ikhawulezayo kokwendalo zamazwe angaphandle. Ngokwesiqhelo amazinga otshintshiselwano yokhuphiswano, kwaye uya kuba nako ukufumana iinkonzo exchange nanini. Abakhenkethi kufuneka, nokuba, lokuqhagamshelana yekhadi letyala okanye debit card inkampani zabo ukubaxelela ukuba baya awayeye ilizwe ngokusebenzisa amakhadi abo ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko na activated.
ATM zinika iindlela ezilula ukutshintsha imali. Thetha nebhanki yakho malunga neerhafu lunokubakho usebenzisa-ATM ngaphandle kwindawo yakho.
ngoko ke, ubunokuyenza iindlela ezininzi kokwendalo iimali ezifana moya, iibhanki, zemboleko kunye namakhadi nazo kuyitsala, ATM. Le yeyona ngokubanzi kusetyenziswa izisombululo. Kodwa le Web, ukuze kufumanisa zamakhonkco kunikhokelela lokufumana indlela eyongezelelweyo kokwendalo eDola Canadian ukusuka iincam yokutshintsha imali.
Ngenxa ukutshintshela iimali ebhankini, ukuba ugcwalise ifomu uze usayine onke itshekhi ngoxa phambi umamkeli. Uyakwazi ukugcina iinkangelo, Ukuba ubani ntoni ukuba ibekwe, kuya kuba lula ukuba ukuyibuyisela.